Diyaaraddii Belavia oo ay la socoto matoorkeedii ciladoobay ayaa deg deg deg ah uga degaysa Moscow
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Diyaaraddii Belavia oo ay la socoto matoorkeedii ciladoobay ayaa deg deg deg ah uga degaysa Moscow
Airlines • Airport • Belarus Jebinta Wararka • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Wararka Ruushka • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Diyaarad rakaab ah oo u dhalatay dalka Belarusiya ayaa soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha ee Domodedovo Airport ee magaalada Moscow iyadoo la socota hal mishiin oo kaliya.
Diyaaradda Boeing 737 ee ay maamusho Belavia ayaa baaq deg deg ah u dirtay Ruushka.
Diyaaradda rakaabka ee Belavia ayaa ka ambabaxday Minsk kuna sii jeeday magaalada Antalya ee dalka Turkiga.
Diyaaradda Belavia waxaa saaran rakaab gaaraya 197 iyo XNUMX shaqaale ah.
Diyaarad rakaab ah oo nooceedu ahaa Boeing 737 ayaa waxaa ku shaqeysay shirkadda duulimaadka hawada ee Belarusiya Belavia, oo ka ambabaxay Minsk, Belarus kuna sii jeeday Antalya, Turkey, ayaa si deg deg ah ugu degtey Madaarka Moscow Domodedovo ka dib markaad dirto calaamadda degdegga ah ee duulimaadka dhexe.
“Duulimaadkii Belavia ee B29215 oo ka ambabaxay Minsk kuna sii jeeday Antalya wuxuu si guul leh ugu degay Domodedovo,” ayay yiraahdeen saraakiisha duulista Ruushka.
Sida ay wararku sheegayaan diyaaradda Belavia ayaa ka degtay garoonka diyaaradaha ee Domodedovo iyadoo leh hal matoor oo shaqeynaya.
Isniintii, Belavia Boeing 737 diyaarad rakaab ah oo ka soo ambabaxday Minsk kuna sii jeeday Antalya ayaa u dirtay baaq deg-deg ah iyadoo dul heehaabeeysa gobolka Belgorod ee ku yaal Ruushka.
Diyaaraddu waxay dul mareysay Ukraine, ka dib markii ay dirtay calaamadda dhibaatada, way soo degtay oo waxay u bedeshay koorso markii hore Voronezh ka dibna Moscow.
Waxaa saaran rakaab gaaraya 197 iyo XNUMX shaqaale ah.
Ma jiraan wax war ah oo sheegaya dhimasho ama dhaawac kadib deg deg deg deg ah.